အမျိုးသမီးများအတွက် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသော နှလုံးအမည် Stainless Steel လည်ဆွဲကို ဝယ်ပါ - အခမဲ့ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် အခွန်မဆောင်ပါ | WoopShop®
အမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်ကြိုက်အမည် Stainless Steel လည်ဆွဲ
အရှည် 40cm 55cm 50cm 45cm
သတ္တုအရောင် ရွှေအထ ရှေ ငှေ
သင့်လျော်သောအသုံးပြုသူများ, ပွဲတော်စိတ်တိုင်းကျ အများအားဖြင့်
ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့် 40cm / နှင်းဆီကိုရွှေ / ပုံမှန်အားဖြင့် 55cm / gold / gold ပုံမှန်အားဖြင့် 50cm / gold / gold ပုံမှန်အားဖြင့် 45cm / gold / gold ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့် 55cm / နှင်းဆီကိုရွှေ / ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့် 50cm / နှင်းဆီကိုရွှေ / ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့် 45cm / နှင်းဆီကိုရွှေ / အများအားဖြင့် 40cm / silver / silver ပုံမှန်အားဖြင့် 40cm / gold / gold အများအားဖြင့် 55cm / silver / silver အများအားဖြင့် 50cm / silver / silver အများအားဖြင့် 45cm / silver / silver
အမျိုးသမီးများအတွက်သီးသန့်နှလုံးသားအမည် Stainless Steel လည်ဆွဲ - ၄၀ စင်တီမီတာ / နှင်းဆီရွှေ / အများအားဖြင့်၊ အများအားဖြင့် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အခမ်းအနား- ခရစ္စမတ်၊ ပါတီ၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ မွေးနေ့၊ နှစ်ပတ်လည်၊ နေ့စဉ်ဝတ်
ရာသီ- နွေ၊ နွေ၊ ဆောင်း၊ ဆောင်း
အမျိုးသမီးများအတွက်လည်ဆွဲ- Bohemian ဒီဇိုင်း၊ ဂျီဩမေတြီအမည်လည်ဆွဲ
Chain အမျိုးအစား: Box Chain
Pendant အရွယ်အစား: ကွဲပြားခြားနားသောအမည်ဖြင့်ပြပါ
စတိုင် - ဘိုဟီးမီးယား
ငွေပေးချေသည့်အခါတွင် သင့်အမည်ကိုချန်ထားခဲ့ပါ။ (ဥပမာ Belle)
​ရေချိုးခြင်းနှင့်ရေကူးဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်, ထုတ်ကုန်ပါလိမ့်မယ် ဘယ်တော့မှမပျောက်ပျက် ဘယ်တော့မှမတည့်ပါ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေး!
58 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ပြီးပြည့်စုံတယ်။ ချစ်ရသူ။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ခ တစ်လထက်မပိုပါ။ ဆိုင်အတွက် ကြယ်5ပွင့်။ အရမ်းလှပြီး ဈေးသက်သာတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Trés belle, ကျေးဇူး